10 Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili emhlabeni | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Ikhambo Tips > 10 Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili emhlabeni
(Kugcine ukubuyekezwa On: 30/07/2021)
Lapho uzwa igama elithi steakhouse, ngokushesha uzocabanga nge-US noma i-Europe. Nokho, lezi akuzona ukuphela kwezindawo zokufuya izinkomo nokudla inyama yenyama. Wagyu noKobe, okubhekwa njengokusikwa kwenkomo okuhle kakhulu emhlabeni, ivela eJapane. Ngaphezu kwalokho, izindawo ezinjengePortugal ne-Argentina zifanelwe ukubalulwa okukhethekile.
Izinkomo ezondliwe ngotshani zesifunda esithile zizoba nokunambitheka okumnandi okuqonde ngqo kuleyo ndawo ethile. Sengikushilo lokho, ukusika okumnandi kwe-steak kuyindlela yokukhetha iningi labathandi benyama. Silukhethile lolu hlu lwefayela le- 10 Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili emhlabeni, okufanele kube ku uhlu ibhakede uma i-steak ingenye yokudla okuthandayo.
1. I-Goodman Steakhouse, London
Phakathi kwezindawo zokugcina ukudla ezihamba phambili emhlabeni, UGoodman udabuka eNew York. UGoodman uvule igatsha laseLondon ngo 2008, futhi i-franchise iye yanda yaya kwezinye izindawo ezintathu kusukela lapho.
Indawo yokudlela inikezwe iMichelin Star futhi ithandwa ngabanikazi bayo ngenxa yezimpawu zayo zesikhumba nezinkuni ezilingisa i-New York vibe. Amakhasimende athola ithuba lokukhetha kusuka eSpain, UK, noma ukusikeka kwe-US. Indawo yokudlela idala inyama yayo esizeni futhi iyaziqhenya ngeso layo lobambo.
I-Steakhouse kaMancy eToledo, I-Ohio, ingenye yezikhungo ezidume kakhulu. Indawo yokugcina inyama yasungulwa ngo 1921 futhi, uma kukholwa abantu bendawo, iyaqhubeka igcwele kusukela ngosuku 1, ngisho naphakathi nesonto. Kuyalulekwa ukuthi kubhekwe Isimo sezulu seToledo ngaphambi kokuphuma lapho ngoba kungadingeka ukuthi ulinde kancane ukuze ungene.
Kuhle ukukhetha usuku lapho isimo sezulu eToledo simnandi, futhi ukulinda ngaphandle kuzokwandisa kuphela ukulindelwa kokwakho ngaphakathi, ukungakuphoqi ukuba ubuyele kwenye indawo. I-steakhouse kaMancy isebenza nge-USDA Certified Angus, kanye ne-Angus Prime Steaks asebekhulile futhi abahlatshwe esizeni. Izikhathi ezijwayelekile futhi zifunga ngezinhlanzi zasolwandle ezinikezwe lapha, ikakhulukazi i-Alaskan King Crab ne-Australian Lobster.
3. SIKA NguWolfgang Puck, Singapore
UWolfgang Puck akadingi singeniso. Umpheki nodumile waseMelika odabuka e-Austrian wavula indawo yakhe yokudlela yokuqala yase-Asia ebizwa SIKA eMarina Bay Sands, Singapore, e 2010. Kusukela umbuso we-CUT wandile emhlabeni jikelele, kodwa igatsha laseSingapore liyaqhubeka nokuba lihamba phambili.
Abaxhasi bangajabulela iKobe esezingeni lomhlaba, 300-i-Angus esuthiswa ngosuku, noma i-A5 Wagyu. Ubungcweti balesi sikhungo yizinhlu zamasoso asendlini kanye neqoqo elibanzi lewayini elihamba kahle nganoma yikuphi ukusika okuyinhloko kwe-steak.
I-Aragawa eTokyo ingenye yezindawo zokugcina ukudla ezibiza kakhulu emhlabeni. Indawo yokudlela enezinkanyezi iMichelin yaziwa ngompheki wayo – Yamada Jiro, okhonza kuphela inyama yenkomo yaseKobe ehamba phambili emhlabeni.
I-USP yale ndawo yokudlela ukuthi iphakamisa umhlambi wayo wezinkomo ezifuyiwe zeTajima selokhu yavulwa 1967. Ukulawulwa kwekhwalithi okuhle kakhulu nokukhethwa kwepakethe elikhethiwe kunakho konke kwenza i-Aragawa ibe yindlela yokudlela kanokusho.
5. UPeter Luger, I-New York
Leli bhizinisi eliqhutshwa ngumndeni liyaziqhenya ngesitifiketi salo esiyinhloko se-USDA. Bangenisa inyama ehamba phambili kusuka maphakathi nentshonalanga futhi bayomise egcekeni. Le ndawo yokudlela enezinkanyezi zaseMicrosoft nayo endala kakhulu, sesimisiwe ku 1887.
Le ndawo ithathwa njengesithonjana sendawo yokudlela yaseNew York City kanye nenkambiso yokudlula kwabaningi. I-Porterhouse steak, abaneminyaka eyomile esakhiweni se- 28 izinsuku, isidlo esinconywayo esinohlangothi lwamazambane othosiwe aseJalimane namasoso asendlini.
6. U-Antica Osteria Nandone, Tuscany
Ukugijima nguPaolo Mugnai eTuscany, i-Antica Osteria yavula iminyango yayo phakathi 2007 futhi ine-rustic, izwe elidala lizizwa ngesipiliyoni sokudlela se-premium. Indawo yokudlela yaziwa ngeBistecca Alla Fiorentina yayo, i-steak yase-Italy eyenziwe nge-veal noma isithole kanye nesitsha esibalulekile ekudleni kwaseTuscan.
Ukugqama kokuhlangenwe nakho kokudlela e-Antica Osteria ngumpheki olungiselela inyama ethambo phambi kwakho engasebenzisi lutho ngaphandle kwamafutha omnqumo aseTuscan kanye nosawoti omncane wolwandle.
EChicago, IGibsons Bar neSteakhouse bayaziqhenya ngokuba yinketho yokuqala yokudlela ezweni ukuthola okwabo Isitifiketi se-USDA yenkomo yePrime Angus.
Le ndawo yokudlela yaziwa ngezinkomo zayo zeBlack Angus, uphekelwe umbila we 120 days bese omile egcekeni le- 40 izinsuku. Abantu bendawo lapha eChicago bafunga inyama ye-WR yaseChicago yokusika inyama, amazambane aphekwe kabili eceleni, nosawoti odumile wokuthosa weGibons.
8. I-Grillhouse, Johannesburg
IGrillhouse eseGoli ithathwa njengendlu yenkomo ehamba phambili kunazo zonke eNingizimu Afrika. Indlu eyakhiwe ngesitayela yaseNew York yaziwa ngokuhlinzeka ngomucu ocekeceke ngezinongo owenziwe emhlabeni kanye nezimbambo ezinhle kakhulu ezihambisana nemalitha eyodwa ye-premium iwayini wendawo.
Le ndawo idume ngobambo lwayo lokuqala olosa kancane, eyosiwe elangabini eliphansi kusuka noma yikuphi phakathi kuka-9 kuya ku-9 12 amahora. Okunye okukhethekile kwale ndawo kufaka i-T-bone ne-rump. Okwenza le ndawo yokudlela ihlukaniswe ama-steaks enkomo aseNingizimu Afrika kanye nabasebenzi abasebenza kahle kakhulu.
Njengoba sishilo kwisingeniso, I-Argentina ingesinye sezifunda ezihamba phambili ukukhiqiza inyama yenkomo yethenda namanzi enambitheka eqondene nesifunda. ILa Cabana ingenye yezindawo zokudlela ezidume kakhulu eBuenos Aires, etholakala endaweni ephakeme yedolobha.
Indawo yokudlela iphaka ama-steaks ngesidlo sasekuseni, isidlo sasemini, nesidlo sakusihlwa. Ezinye izincomo ezilula zifaka i-T-bone steak yazo, inyama yenkomo, ubambo lokuqala, nezimbambo ezinomugqa omncane. Indawo yokudlela ibuye inikeze iqoqo elibanzi lewayini elihle lendawo ozohamba nalo nge-steak yakho.
10. I-Caprice, Leon, Spain
U-El Capricho kuLeon, Spain, kubhekwa njengokuhamba ngezinyawo ngabathandi benyama ngoba kuphele ngokuphelele emikhondweni eshayiwe, kude nokwaziwa kakhulu izivakashi eSpain. Kutholakala eLeon, I-El Capricho iphethwe nguJose Gordon, umlondolozi, umpheki, nomlimi.
Indawo yokudlela yaziwa ngenyama yayo ekhuliswe ezinkomeni nasezinkomeni ezindala ezivela enhlonhlweni yase-Iberia phakathi kweminyaka yobudala eyisikhombisa kuya kweyishumi nantathu.. Kanye kuhlatshwe, inyama yenkomo yomile 160 izinsuku, okuphakeme kakhulu kunokujwayelekile. Abaxhasi bangajabulela ama-T-bones, nciphisa, noma i-sirloin eboshwe ekupheleleni kumlilo ovulekile womlilo, kuhlanganiswe nengilazi yewayini lendawo elihle kakhulu.
Lokhu kuphetha uhlu lwethu lwabaphezulu emhlabeni 10 izitobha ezihamba phambili. Uma uzibheka njengomthandi wenyama, konke okukodwa kwalokhu kufanele kube kuhlu lwakho lwamabhakede.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo lokudla oluya e-foodie 10 Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili emhlabeni.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo Ezingama-10 Ezihamba Phambili Zomhlaba” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fbest-steakhouses-world%2F- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
BestSteakhouses BestSteakhousesWorldwide I-Carnivore MeatEaters Steak Indlu yesiteki